Torolàlana momba ny fividianana tanteraka ho an'ny bodybuilding SARM SR9009
/Blog/Gallery/Torolàlana momba ny fividianana tanteraka ho an'ny bodybuilding SARM SR9009
Posted on 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
1.Inona ny SR9009?
SR9009 na stenabolic dia famenony CAS 1379686-29-9 izay maka tahaka ny vokatry ny fampihetseham-batana. Tsy ny fanafody ihany no hanampy anao hanafoana ny saboran'ny vatanao be loatra, fa hampitombo ny fiaretanao koa raha mampitombo ny fiaretana.
SR9009 dia sangan'asa sintonika, izay naterak'i Profesora Thomas Burris. Mifandraika akaiky aminy SARMS (Modulators receptor Selective Androgen), nefa agonistika ny proteinina Rev-Erbα hita ao amin'ny hozatry ny tenda, ny tenda adipose, ny ati-doha ary ny atiny.
Profesora Burris no tonga niaraka SR9009 (1379686-29-9), mikasa ny handalina sy hahatakatra ny masonkoditra circadian.
2.Hinona no mandeha ny SR9009?
Fantatrao ve fa ny fahatsapana azonao rehefa avy nihazakazaka 2km amin'ny tady ambony ianao na manangana mavesatra entana sasany? Tsara, SR9009 drugs hahatonga anao hahatsapa toy izany koa. Ny sombin-javatra dia manana anjara toerana amin'ny fanodinana circadian, ny fitsipiky ny lipid ary ny fifehezana ny haavon'ny glucose.
SR9009 SARM dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famporisihana an'i Rev-Erb. Io proteinina io dia misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny vatana mandoro tavy, siramamy ary kolesterola ratsy. Noho izany, manatsara ny fizotran'ny fihenan-danja izy ary manatsara ny fiaretana. Na dia manao fanatanjahan-tena aza ianao dia hahatsapa ho mavitrika sy tsy dia reraky be loatra ka afaka manao fiofanana ara-batana bebe kokoa.
Ny metabolista stenabolic dia manome metabolika ny tavy, lipida ary siramamy. Rehefa optimum ny fanjifan'ny solika ny vatana dia tsy isalasalana fa hahatratra tampon'isa fahombiazana ianao. Ao amin'ny fanadihadiana mialoha ny fampiasana modely murine, ny totozy izay ambanin'ny SR9009 vovoka (Ny 1379686-30-2) dia mety hihazakazaka indroa haingana kokoa noho ny teo aloha. Ity porofo ity dia mety ho antony nahatonga ny stenabolic voatanisa teo amin'ireo zava-mahadomelina voarara amin'ny atletisma.
Raha tsy maniac ianao dia ity vaovao ity no tadiavin'ny sofinao ho re. Ny stenabolic dia mampitombo ny tahan'ny metabolikao rehefa miala sasatra ianao. Rehefa avy misakafo dia mamadika ny sakafo ho tavy ny vatanao. Na izany aza, ny fanampim-bolan'ny SR9009 dia hampiakatra ny metabolisma eo noho eo ka hanomboka handoro an'io tavy io avy hatrany.
Ny fikarohana natao vao haingana dia nanondro fa ny stenabolic dia mpandraharaha anti-homamiadana. Ny antagonista an'ny homamiadana SR9009 dia misy fiantraikany amin'ny mpamily oncogen, anisan'izany ny PIK3CA, HRAS, ary BRAF. Ao amin'ny sela maharary, ny vokatra dia mamporisika ny apoptosis ary manamafy ny fitomboan'ny fivontosana tsy mitondra voka-dratsy.
3.Fa ahoana no fampiasana SR9009
Ankoatra ny fampiasana label io marika fitomboan'ny hozatra SR9009 ny zava-mahadomelina, ny fanampin-javatra dia manana lanjany fanafody manan-danja. Ny dokotera dia maniry mafy izany ho an'ny marary diabeta sy ireo olona mora tazo.
Raha mikasa ny hitantana vovoka SR9009 ianao (1379686-30-2) amin'ny fitantanana ny aretina mahazo anao, dia ho azonao antoka fa hiresaka amin'ny dokotera mialoha ianao. Azo antoka ny fanafody, saingy ny dokotera dia tsy maintsy manoro hevitra anao momba ny fanafody ankehitriny raha manara-maso ny soritr'aretina ratsy.
Ho an'ny fampiasana label voatondro mivoaka, fatra SR9009 mahazatra dia manodidina ny 30mg / andro. Mizara telo ny fatra.
Raha efa maharitra ianao dia tokony handray ny fanampin-tsakafo alohan'ny fotoana hikapohana ilay gym. Ny antony dia satria manana fohy tapany fohy ny SR9009; noho izany, ny vokatra dia mipoitra amin'ny tselatra. Tsara raha mitantana alohan'ny sakafo mba hahafahanao mihazona metabolisma mahomby mandritra ny andro.
4.Fanasoavan'ny SR9009, Inona no antenainao?
Mampiroborobo ny fatiantoka enta-mavesatra
SR9009 SARM manatsara ny fizotran'ny metabolika. Raha vantany vao vita ny fihinana, dia tokony handrindrina ny vatana ny stenabolic handoro ny kaloria be loatra fa tsy hanova azy ireo ho tavy. Tsy ny suplement ihany akory no mampihena ny fototarazo mitahiry tavy, fa mampihena koa ny famokarana sela matavy vaovao ao amin'ny atiny.
Raha ny fahaverezan'ny fitomboan'ny vatana, ny tanjonao dia asio fampidirina vatana mandritra ny fanazaran-tena. Ny fiasana, ny fisakafoanana ary ny fandraisana SR9009 mialoha ny fanatanjahan-tena dia manafaingana ny fandoroana be loatra. Ny fikarohana dia nanondro fa ny fampiasana stenabolic dia mampihena ny asidra matavy sy plasma triglycerides amin'ny alàlan'ny 23% ary 12%.
Amin'ireo tranga tafahoatra izay tsy miasa intsony ny miasa na ny fihinanana sakafo, dia angamba ny dokotera no hanoratra an'io fanampiana io.
Mikasa amin'ny alàlan'ny famerenan'ny mpanjifa, mpampiasa iray dia nanamafy fa ny vovoka SR9009 (1379686-30-2) dia nanampy azy nandatsaka ny 17 kilao tao anatin'ny telo volana.
Ity famenon-tsakafo ity dia tsy vitan'ny hoe mampitombo ny hozatra fotsiny fa manatsara ny tanjany sy ny asany. Ny fahatsapana azonao aorian'ny fitantanana ny fatra SR9009 dia mitovy amin'ny fampiakarana lanja.
Ny zava-mahadomelina dia manentana ny famokarana mitochondria ao anaty sela hozatra, noho izany dia mitombo ny metabolism. Ireo organelika ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana angovo ao amin'ny hozatra hozatra. Ankoatr'izay, hisy ny fitomboan'ny fampiasana glucose ary ny fanjifana asidra matavy ao anatin'ny hozatra.
Amin'ny lafiny klinika, ny SR9009 dia mahazo tombony amin'ireo zokiolona mijaly noho ny fihenan'ny hozatra na ny sarcopenia.
Ampitomboy ny fiaretana
Ny ankamaroan'ny gymnast dia tsy ho diso amin'ny fampidirana zava-mahadomelina hozatra SR9009 amin'ny fomba fitaizan-dry zareo. Hanandratra ny lanjanao ianao, hampandeha ny fitoeran-tongotra, na hanao fanazaran-tena na inona na inona nefa tsy reraka na maivana.
Ny famenony dia tsy isalasalana fa haka ny fahaizanao ho avo kokoa noho ny teo aloha. Raha noheverinao fa fisolokiana ireo tombontsoa azo avy amin'ny SR9009 ireo dia tokony hanontany tena ianao hoe nahoana ny maso ivoho anti-doping no mandrara mafy ny fampiasana azy amin'ny fanatanjahantena fifaninanana.
Araka ny nolazain'i Thomas Burris, mpanorina ny Stenabolic, ny zava-mahadomelina dia manova anao ho lasa atleta efa za-draharaha ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy ho lany hery na hatanjaka ianao na dia manao fanazaran-tena mahery aza.
Ampitomboy ny fahatsoram-po
Raha rendremana foana ianao mandritra ny andro, dia ny stenabola no mety ho fanafodinao manaraka. Ao anatin'ny fandinihana iray mialoha, ny fanampin-javatra dia toa manova ny torimaso fatin'ireo modely murine. Ny mpahay siansa dia nahatsikaritra fa ireny malina ireny dia mailo kokoa mandritra ny andro, ary tsy misy afaka matory fatratra. Ka raha te hisoloka amin'ny gadona circadiano ianao hanovana ny torimasonao fatorianao, dia faly i SR9009 hanao izany.
Noho ny antsasak'adiny SR9009 fohy dia vetivety ny fiomanana amin'ny fifohazana. Noho izany, tsy ho diso fanantenana mandritra ny tontolo andro ianao.
Ratra Tissue (Fibrosis)
Ny fikarohana dia nanamafy fa ny totozy amin'ny fibrosis amin'ny atiny dia sitrana tanteraka rehefa avy naka SR9009 nandritra ny roa herinandro.
Miaro amin'ny aretim-po
Amin'ny tranga izay mampitombo ny fo dia mihabetsaka ny vovoka SR9009 (1379686-30-2) miasa amin'ny fanafoanana ny anomaly amin'ny fampihenana ny haben'ny lanjan'ny lanjan'ny taova. Rehefa tsaboina amin'ny stenabola ny totozy sasany, ny mpikaroka dia nanamarika ny fihenan'ny haben'ny lalan-drà taorian'ny herinandro fito.
Ny mpampiasa sasany dia miaiky fa manana anjara lehibe amin'ny fampihenana ny tosidrany ny tohana.
Mampihena ny kolesterola rà
Raha be loatra ianao, dia mitahiry ny habetsaky ny kolesterola avo lenta aminao. Ny SR9009 dia hihena hatramin'ny 47% amin'ny LDL, noho izany dia hahomby kokoa ny asanao. Marihina fa tsy misy fiantraikany amin'ny ambaratonga HDL ny famoana.
Mihena ny manavotra
Rev-Erbs dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fitantanana ny fihanahana sy ny ratra ao amin'ny CNS. Ny SR9009 dia mandrisika ireo andrim-by nokleary Rev-Erbα, izay misy fiadiana manohitra ny fanaintainana.
Ny zava-mahadomelina dia manakana ny famokarana molekiola mihanaka toy ny CCL2, MMP-9, ary TNF-α. Koa satria ny fahasimban'ny tiro sy ny fihanaky ny tony dia antony oncogenika, ny mpahay siansa dia mandinika ireo antom-bavan'ny SR9009 cancer antagoniste amin'ny senescence oncogene-induced.
Ny SR9009 dia mampihena ny tebiteby amin'ny modely voalavo.
Raha trypanophobia, misy vaovao tsara ho anao. Tsara, azo jerena ny fitantanana am-bava ny SR9009. Tsy misy fangirifiriana intsony, toy ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina matavy.
5.Half Fiainan'ny SR9009
Ny antsasaky ny SR9009 dia fohy ny adiny efatra. Noho io antony io dia tsy maintsy mizara ny fatrao ianao mandritra ny adiny efatra mba hampiorenana ny fahaizan'ny zava-mahadomelina ao anaty lalan-dra.
6.SR9009 Fatra sy bisikileta
Ny fatra SR9009 dia miankina amin'ny antony vitsivitsy. Izany hoe, inona no tianao ho tratrarina ary raha mampiditra fanafody hafa amin'ny tsingerinao ianao. Ankoatr'izay, ny habetsahan'ny fanafody dia miankina amin'ny fihetsiky ny vatanao ihany koa.
Ny fatra antonony dia 30mg isan'andro, izay azonao zaraina telo fatra manokana. Amin'ny fomba ara-bakiteny, io fanafody io dia midika fa tokony hitantana ny pilina ianao alohan'ny hisakafoanana amin'ny telo miraon-datinao. Raha izany aza, azonao atao ny mampiasa ny supplement a isaky ny efatra ora.
Ny ankamaroan'ny fotoana, manala ny vovoka SR9009 (1379686-30-2) dia mety ho feno fahasosorana, indrindra amin'ireo mpampiasa tsy manam-paharetana. Na iza na iza afaka hisotro zava-mahadomelina mandritra ny adiny efatra tsy miteraka korontana? Noho izany, raha toa ianao ka tsy milamina miaraka amina fandaharam-potoana mifototra ity, azonao atao ny manapa-kevitra ny hampiasa azy io ora iray alohan'ny hanatanterahana asa ara-batana.
Ny tsingerin'ny SR9009 dia mandeha eo anelanelan'ny valo ka hatramin'ny roa herinandro. Koa satria misy ny mety hilefitra amin'ny zava-mahadomelina, dia tsara raha maka herinandro 8.
Ity fanafody ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny atiny na ny voa. Na izany aza, azonao atao ny miaro ireo taova ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana fanafody mahery vaika hafa toy ny N2Guard amin'ny tsingerinao SR9009.
7.Do Mila PCT ho an'ny SR9009 ve ianao?
Tsy toy ny sakafo hafa famelan-keloka hafa fa tsy mitaky stenabolic PCT (Post Therapy Therapy) satria tsy manelingelina ny haavon'ny testosterone.
8.Fampiasa ny lafiny ratsy sy ny loza ateraky ny fampiasana SR9009
Ireo soritr'aretina eo ambony ireo dia misy fiantraikany amin'ny vao manomboka. Raha vao mifikitra amin'ny fanampin-javatra ny vatanao dia hanjavona ireo soritr'aretina. Na izany aza, raha ny vokatra goavan'ny SR9009 manjary ratsy kokoa, tokony hatsipinao ilay izy ary hiresaka amin'ny mpitsabo anao.
Ny SR9009 dia mety hiharatsy ny toe-piainan'ny lehilahy voan'ny libido ambany na ireo ety ivelany. Indraindray, ny sombin-javatra dia mitondra amin'ny haavo testosterone ambany.
Stenabolic dia tsy a steroid. Noho izany, ny fandraisana izany dia tsy hanelingelina ny rafitra hormonina. Tsy hidina ny tahan'ny testosterone anao, ary tsy ho lasa estrogen koa ny zava-mahadomelina. Ho an'ny vehivavy, ny famenon-tsakafo dia tsy hiteraka tsingerim-bolana tsy mahazatra.
9.Stacking SR9009 miaraka amin'ny SARM hafa
Mijanona SR9009 miaraka amin'ny Ostarine (MK-2866) dia hahatratra valiny miavaka, indrindra ho an'ny dingana famerenana.
Ostarine, amin'ny tenany ihany, dia SARM tena tsara ho an'ny kitapo mampamono sy manapaka. Na izany aza, raha mila fiaretana fara tampony ianao, dia tokony hatsanganao amin'ny SR9009 izany. Mandritra ny fatotra dia ataovy azo antoka ny fampiasana 25mg ny ostarine isan'andro. Ho an'ny stenabola, 10mg no mety hiasa, fa tsy maintsy alainao ianao rehefa efa saika hikapoka ny foibem-pahasalamana.
SR9009 sy GW501516 (Cardarine) manana fitoviana akaiky. Ny fandinihana sasany aza dia miady hevitra fa ireo sambarana roa ireo dia mamatotra amin'ireo mpandray ireo.
Araka ny efa fantatrao, ny stenabolic dia manana antsasaky ny fiainana maharitra, izay tsy haharitra anao iray andro. Mifanohitra amin'izany, ny bioavailaka kardarine dia maharitra 24 ora. Ny fampifangaroana azy roa dia hisy vokany 24/7.
Raha mampiasa SR9009 akaikin'ny GW501516 ianao dia tokony hihevitra ny taloha ho toy ny fanampin-tsakafo mialoha. Midika izany fa tokony hitantana stenabolic fotsiny ianao amin'ny andro iasanao izao.
Rehefa eo amin'ny stack SR9009 dia 10mg fotsiny ny fatra, izay tsy maintsy raisinao vetivety alohan'ny hiasa. Ho an'ny GW501516, ny fanafody mety indrindra dia 20mg / andro, izay hitondranao ny sakafo maraina.
Ny famarotana SR9009 no tena mikendry ireo mpanao bodybuilders izay aorian'ny faharetana, fitomboan'ny fampisehoana vatana, fanarenana haingana amin'ny fiasana sy fananganana hozatra.
Avy amin'ireo fandinihana an-tserasera samihafa dia mitatitra ny fanatsarana ny fiaretana amin'ny famerenam-paharetana bebe kokoa satria afaka manao fanazaran-tena izy ireo nefa tsy mahatsiaro reraka. Ho an'ny sasany, ny fitomboan'ny stamina sy ny angovo mahery vaika dia teo amin'ny haavo avo kokoa avy hatrany taorian'ny fitantanana ny vovoka SR9009 (1379686-30-2).
Amin'ny lafiny ratsy, ny mpampiasa sasany dia tsy nahavoky ny fatra matetika isaky ny efatra ora. Na izany aza ireo izay nampiasa ny antontam-paty SR9009 dia tsy nahita izany ho nanelingelina azy satria voatery naka tahaka ny fanampin-tsakafo ihany izy ireo raha nita ny gym.
Mpivarotra vitsivitsy no niaiky fa ny stenabola dia tsy nahatonga azy ireo hahatsapa be loatra. Ankoatra ny tsy fahatongavan-tena dia tsy nisy toa nanoratra ny fiantraikany ratsy amin'ny SR9009.
11. Isika SR9009 Bioavailable?
Nisy ny fiheverana fa ny SR9009 dia tsy manana bioavailable, indrindra amin'ny fitantanana am-bava. Na izany aza, azoko antoka fa holavina izany satria raha tsy misy bioavail ilay famenony dia mety tsy hisy ny valiny SR9009 tsara amin'ny vatan'olombelona.
12.Anona hividy SR9009
Mpivarotra tsy tambo isaina no mametraka ny SR9009 amidy. Na dia ny fivarotana an-tserasera aza dia toerana mety hividianana ny famoahana, dia tokony hitandrina tsara ianao mba tsy hitera-doza amin'ireo vokatra sandoka.
Raha mila stenabola na sarin'olombelona ianao dia tadiavo avy amin'ny mpamatsy laza malaza. Afaka manamboatra baiko ianao AASraw.
13.SR9009 ho an'ny fananganana vatana
SR9009 vovoka (1379686-30-2) niditra an-tsokosoko tao amin'ny indostrian'ny fanatanjahan-tena rehefa nanamafy ny fikarohana fa ny sela dia mahatonga hozatra matevina. Ankoatr'izay, tena mavitrika izy ireo, nampiseho fampisehoana vatana tena tsara, ary mahery setra kokoa noho ny teo aloha.
Ireo bodybuilder izay aorian'ny fametahana na fanapahana dia handray soa feno amin'ny SR9009. Amin'ny toe-javatra tokony hampiofananao mafy kokoa, ny zava-mahadomelina dia mampitombo ny tahan'ny fonao indrindra, ka mametra ny fahazavana sy ny havizanana. Ankoatr'izay, ny famenon-tsakafo SR9009 dia mampihena ny fivontosana sy ny fahasimban'ny sela ka ny dingana fanarenana dia haingana araka izay azo atao.
SR9009 fanamoriana bodybuilding dia miasa ho an'ny fampivoarana fampisehoana. Farafaharatsiny, misy fisedrana voajanahary mba ahafahana mamerina an'io tranga io sy ny fijerena ny mpampiasa hevitra tsara momba ny vokatra.
Na izany aza, ny fahombiazan'ity zava-mahadomelina ity dia taolana fifandirana teo amin'ireo mpahay siansa sy mpikaroka ary mpahay siansa amin'ny ankapobeny. Ohatra, nisy anecdotes fa ny bioavailability am-bava SR9009 dia aotra. Eny, tsy te hihetsika amin'ny mpisolovava ny devoly aho, fa ny 95% amin'ireo mpampiasa stenabolic dia manamafy ny fahombiazany. Ankoatr'izay, tokony hanontany ianao hoe nahoana ny fikambanana anti-doping no mety hanana nerveuse handrara ny fampiasana azy amin'ny atletisma raha tsy mahomby ilay fanafody.
Mariho fa ny valin'ny SR9009 dia mibanjina rehefa miasa tsy tapaka rehefa manao sakafo mahasalama. Halaviro ny sakafo matavy, kaloria ary mangalà tsy misotro amin'ny sigara sy ny fisotroana.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Ny fitsipiky ny fitondran-tena sy ny metabolisma Circadian nataon'i REV-ERBα ary REV-ERBβ. Laboratory Gene Expression, Salk Institute for Biology Studies.
Morioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., ary Nakata, Y. (2016). Ny fanamafisana ny mpitrandraka ny nokleary REV-ERB dia mifehy ny Tumor Necrosis Factor-Voaporofon'ny fampandehanana ny otrik'aretina Pro-mamaivay ao amin'ny sela Astroglial C6.
Thomes, PG, Brandon-Warner, E., et al. (2016). Agonista an'ny Rev-Erb sy ny TGF-β dia misy fiantraikany amin'ny Autophagy nefa tsy mitovy kosa ny fifehezana ny sela findramam-piraidrazy antsoina hoe Hepatic Stellate. Int J Biochem Cell Biol.
Dodson, B. (2013). Ny zava-mahadomelina vaovao dia manisy soa ny vokatry ny fanatanjahan-tena. Fahasalamana sy fahasalamana.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). Rev-Erbα dia manetsika ny hery mivelatra hozatra amin'ny hozatra amin'ny alàlan'ny fanapahana ny Mitochondrial Biogenesis sy Autophagy. Gazety momba ny fitsaboana voajanahary.
Sulli, G., Rommel, A., et al. (2018). Ny fampahavitrihana ny famerenam-panafody ny REV-ERB dia mamaivay amin'ny kansera ary Senescence izay voan'ny Oncogene. Natiora (Gazetin'ny siansa anatiny).
Powder Synephrine HCL - Famonoana menaka sy famenon-danja
Ny fiheverana mahazatra matetika eo amin'ny tontolon'ny steroids anabolic Ny zavatra rehetra momba ny Oxandrolone (Anavar), mila fantatrao